Midowga Yurub, Midowga Afrika, IGAD iyo QM oo war cusub ka soo saaray qilaafka madaxda Soomaalida | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Midowga Yurub, Midowga Afrika, IGAD iyo QM oo war cusub ka soo...
Khilaaf ayaa weli waxa uu ka taagan yahay doorashada Soomaaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Qaramada Midoobey iyo ururrada Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo IGAD ayaa soo saaray qoraal ay uga hadlayaan khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee salka ku haya qabsoomidda doorashooyinka dalka.
Qoraal ay soo saareen kulankaas kaddib ayey ku sheegeen inay si aad ah uga walaacsan yihiin is-mari waaga siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya oo sameyn xun ku yeelan kara nabadda, ammaanka, xasilloonida iyo baraaraha dalkan kasoo kabanaya burburka.
Qoraal ayaa lagu yiri, “Waxaan ugu baaqeynaa hoggaamiyayaasha Soomaalida inay sii wadaan horumarkii laga sameeyey dhisidda dowladnimada, iyo siyaasadaha loo dhan yahay, gaar ahaan doorashooyinka iyo si nabdoon xukun isugu wareejinta.”
Qoraalka ayaa intaas ku sii daray, “Waxaan caddeyneynaa go’aanka ah inaan taageeri doonin hannaan kasta oo ah doorashooyin is-barbar socda, kuwa hal dhinac ah ama hindise kasta oo cusub oo hoggaamin kara muddo kordhin kasta oo lagu sameeyey muddo xileedyadii hore.”
IGAD iyo QM oo war cusub soo saaray
qilaafka madaxda Soomaalida